ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ ဖြစ်တဲ့ To throw cold water, To hold someone’s hand နဲ့ To drawared line တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) To throw cold water
To throw (ပစ်တာ၊ ရေဆိုရင်ပက်တာ)၊ cold water (ရေအေး) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက်တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ရေအေးနဲ့ ပက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခုခုအပေါ် ရေအေးနဲ့ ပက်လိုက်တယ်ဆိုရင် အေးသွားစေသလို၊ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလည်း စိတ်ဝင်စားမှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွမှုကို အားမပေးတာ၊ ဘဝင်မကျဖြစ်တာ၊ ဝေဖန်တာ၊ သဘောမကျဖြစ်တာ၊ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးခြင်း မရှိတဲ့အတွက် သွေးအေးသွားစေတာကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို မကြာသေးခင်က မြောက်ကိုရီးယားက ICBM ခေါ် တိုက်ချင်းပစ် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ကို ပစ်လွှတ်လိုက်ရာမှာ ဒီဒုံးလက်နက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ Alaska ပြည်နယ်အထိ အကွာအဝေး ရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း အမေရိကန်က ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ခေါ်ယူစေပြီး မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဖို့ အားတက်သရော တောင်းဆိုရာမှာ ရုရှား နဲ့ တရုတ်တို့က အားတက်သရော မရှိလှအတွက်ကြောင့်လည်း Washington Post သတင်းစာကြီးက Russia and China throw cold water on USpressure on North Korea ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
John threw cold water on his wife’s ambitious plan to buildahouse.
John က သူ့ဇနီး စိတ်အားတက်ကြွစွာ အိမ်ဆောက်ဖို့ လုပ်မယ့် အစီအစဉ်ကို အားပေးခဲ့ဘူး။
(၂) To hold someone’s hand
To hold (ကိုင်တာ)၊ someone’s (တဦးတယောက်ရဲ့ )၊ hand (လက်) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က လူတဦးရဲ့ လက်ကို ကိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတဦးအနေနဲ့ တခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့ လက်တွဲကိုင်ထားတဲ့သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်ပေးရာမှာ အခြေခံ အသေးစိတ်ကစလို့ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ဂရုတစိုက် လိုက်လုပ်ပေးတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး အစစအရာရာကို ဖေးဖေးမမ လိုက်လုပ်တာမျိုး၊ အမြဲအားကိုးအားထား နေရတဲ့သဘောမျိုးကိုလည်း ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး Nikki Haleyက တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့ဟာ ပဲ့ထိန်းဒုံး ပစ်လွှတ်တဲ့ မြောက်ကိုရီးယားကို ဆုံးမမယ့်အစား မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကိုဖေးဖေးမမ လုပ်နေတယ်ဆိုပြီး China and Russia holding the hands of North Korean leader ဆိုပြီးတော့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တာကို သတင်းခေါင်းကြီးတွေက ဖော်ပြကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံး ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Mary, I know you will be fine. You don’t need any one holding your hand.
Mary ရေ ၊ ခင်ဗျားအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကျနော်သိပါတယ်။ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ခင်ဗျားအားကိုးဖို့ မလိုပါဘူး။
Draw (ဆွဲတာ၊ တားတာ)၊ared line (မျဉ်းနီ) ဖြစ်ပြီး၊စကားစုတစုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က မျဉ်းနီတကြောင်း တားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနီရောင်ဆိုတာ အရေးကြီးတာ၊ အန္တရာယ်ရှိတာစသဖြင့်ကို ရည်ညွှန်းတဲ့အတိုင်း မျဉ်းတားထားရာမှာ အနီရောင်နဲ့ တားထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီမျဉ်းဟာ အရေးကြီးပြီး၊ တားထားတာကို ဖြတ်ရင် အန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ရည်ညွှန်းတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို နိုင်ငံရေး နဲ့ သံတမန်ရေးလောကတွေမှာ တင်စားသုံးနှုန်းကြတာ တွေ့ရပြီး အထင်ရှားဆုံးကတော့ ၁၉၇၅ ခုနှစ်က ထိုစဉ် Israel နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Yigal Allon က အာရပ်နိုင်ငံတွေ ထိပါးလာရင် Israel က သည်းခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စည်းကို ချပြခဲ့ရာမှာ၊ Drawared line ကို သုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က လူတဦးဦး၊ နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ သည်းခံနိုင်စွမ်း ကုန်တဲ့အခြေအနေဟာ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သတ်မှတ်ရာမှာ Drawared line ကို ရည်ညွှန်းသုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းတော့ အနီရောင်မျဉ်းဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်း၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်ကို မကျော်ဖို့ သတိပေးရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို မကြာသေးမီက Hong Kong ကျွန်း အနေနဲ့ တရုတ်ပြည်ပကြီး လက်အောက်ကို ပြန်ရောက်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) ပြည့်အခမ်းအနားမှာ တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping က ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေတဲ့ Hong Kong မြို့ ခံတွေကို တရုတ်ပြည်မကြီး လက်အောက်မှာ ဘယ်လိုနေ၊ ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်။ ခွင့်မပြုနိုင်တဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ချပြရာမှာ သတင်းမီဒီယာတွေက China’s Leader Xi Jinping drawsared line in Hong Kong လို့ ရည်ညွှန်းသုံးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Hong Kong’s residents marched to defend freedom as China’s President drewared line.
လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းဘောင်ကို တရုတ်သမ္မတက ချပြနေချိန်မှာပဲ ဟောင်ကောင်မြို့ ခံတွေက လွတ်လပ်မှုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေက To throw cold water, To hold someone’s hand နဲ့ To drawared line တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။